परमेश्वरको राज्य नजिकै छ, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
"बसहरू गर्नुहोस्, किनकि स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ!" बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र येशूले परमेश्वरको राज्यको नजिकको घोषणा गर्नुभयो (मत्ती 3,2.२; 4,17.१1,15; मार्क १.१XNUMX) लामो समयदेखि पर्खिरहेको परमेश्वरको शासन नजिकै थियो। यस सन्देशलाई सुसमाचार भनियो, यो शुभ समाचार हो। हजारौं मानिसहरू यूहन्ना र येशूको सन्देश सुन्न र यसको प्रतिक्रिया दिन उत्सुक थिए।
प्रथम शताब्दीमा बस्ने थुप्रै यहूदीहरूलाई "परमेश्वरको राज्य" भन्ने शब्द थाहा थियो। उनीहरू उत्सुकतासाथ भगवान्लाई एउटा यस्तो नेता पठाउन चाहन् जसले रोमी शासनलाई अस्वीकार गरून् र यहूदियालाई फेरि आश्रित राष्ट्र बनाउन् - न्याय, महिमा र आशिषको देश, सबैको ध्यान आकर्षित हुने एउटा राष्ट्र।
यस मौसममा - ईश्वर-निर्धारित हस्तक्षेपको उत्सुक तर अस्पष्ट अपेक्षाहरू - येशू र यूहन्नाले परमेश्वरको राज्यको नजीकको प्रचार गरे। "परमेश्वरको राज्य नजीक आएको छ," तिनीहरूले आफ्ना बिरामीहरूलाई निको पारिसकेपछि येशूले भन्नुभयो (मत्ती १.२०; लूका १.10,7)
येशूको राज्य लोकप्रिय अपेक्षा थिएन - हामी अनुमान गर्न सक्छौं कि धेरै यहूदीहरूले उहाँलाई मृत देख्न मन पराउँथे। उसको राज्य यस संसारबाट बाहिर थियो (यूहन्ना १:18,36:१) जब उसले "परमेश्वरको राज्य" को कुरा गर्थ्यो तब उसले त्यो शब्द प्रयोग गर्थ्यो जुन मानिसहरूले राम्ररी बुझेका थिए, तर उनले तिनीहरूलाई नयाँ अर्थ दिए। उनले निकोडेमसलाई भने कि परमेश्वरको राज्य अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि अदृश्य छ (यूहन्ना::)) - यसलाई बुझ्न वा अनुभव गर्न कसैलाई परमेश्वरको पवित्र आत्माले नवीकरण गर्नुपर्दछ (V. 6) परमेश्वरको राज्य एक आत्मिक राज्य थियो, शारीरिक संगठन थिएन।
जैतून डाँडाको भविष्यवाणीमा, येशूले घोषणा गर्नुभयो कि परमेश्वरको राज्य केही चिन्हहरू र भविष्यसूचक घटनाहरू पछि आउनेछ। तर येशूका केहि शिक्षा र उखानहरूले परमेश्वरको राज्य नाटकीय रूपमा आउँदैन भनेर वर्णन गर्दछ। बीउ चुपचाप बढ्छ (मार्क ,,२4,26-२29); साम्राज्य रायोको दाना जत्तिकै सानो सुरु हुन्छ (V. -30०-32२) र साउट्टर जस्तो लुकाइएको छ (मत्ती 13,33।।) यी उखानहरूले देखाउँदछ कि परमेश्वरको राज्य शक्तिशाली र नाटकीय तरिकामा आउनु अघि वास्तविकता हो। यो भविष्यको वास्तविकता हो भन्ने तथ्य बाहेक, यो पहिले नै एक वास्तविकता हो।
भूतहरू भगाएपछि, येशूले भन्नुभयो: "तर यदि म परमेश्वरका आत्माको शक्तिद्वारा दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्दछु भने, तब परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकहाँ आइसकेको छ" (मत्ती १.२०; लूका १.12,2) राज्य यहाँ छ, र उनले भने र प्रमाण भूतहरु को निष्कासन मा निहित छ। यो प्रमाण आजको चर्चमा जारी छ किनकि चर्चले येशूले भन्दा पनि ठूला कामहरू गरिरहेको छ (यूहन्ना १:14,12:१) हामी यो पनि भन्न सक्छौं: "यदि हामीले परमेश्वरको आत्माद्वारा दुष्टात्मालाई निकाली दियौं भने, परमेश्वरको राज्यले यहाँ र आज पनि काम गर्नेछ।" परमेश्वरको आत्माको माध्यमबाट, परमेश्वरको राज्यले शैतानको राज्यमा आफ्नो अत्यावश्यक शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ।
शैतानको अझै प्रभाव छ, तर ऊ पराजित भयो र सजाय पायो (यूहन्ना १:16,11:१) ऊ आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित थियो (मार्क १: १) येशूले शैतानको संसारमाथि विजय हासिल गर्नुभयो (यूहन्ना १:16,33:)) र परमेश्वरको मदतले हामी त्यसलाई जित्न सक्छौं (१ यूहन्ना :1:१:5,4)। तर सबैजना तिनीहरू पराजित गर्दैनन्। यस युगमा, परमेश्वरको राज्यले राम्रो र नराम्रो दुवै समावेश गर्दछ (मत्ती १:: २-13,24--30०। -36 43--47।-50-24,45०; २.51..25,1--12१; २.14.१-१२। १-30- .०) शैतान अझै प्रभावशाली छ। हामी अझै पनि परमेश्वरको राज्यको गौरवशाली भविष्यको लागि पर्खिरहेका छौं।
परमेश्वरको राज्य शिक्षा मा सक्रिय छ
Aven स्वर्गको राज्य अझै पनि हिंसाले ग्रस्त छ र हिंस्रकहरूले यसलाई लिन्छन् » (मत्ती 11,12।।) यी क्रियापदहरू वर्तमान रूपमा छन् - येशूको राज्यमा परमेश्वरको राज्यको अस्तित्व थियो। समानान्तर खण्ड, लूका १:16,16:१ ले वर्तमान कालमा क्रियापदहरू पनि प्रयोग गर्दछ: "... र सबै जना बलका साथ जोड दिन्छन्"। हामीले पत्ता लगाउनु पर्दैन कि यी उल्लंघनकर्ताहरू को हुन् वा किन उनीहरू हिंसा प्रयोग गर्छन्
- यहाँ महत्त्वपूर्ण छ कि यी पदहरूले परमेश्वरको राज्यलाई वर्तमान वास्तविकताको रूपमा बताउँदछन्।
लूका १:16,16:१ ले पदको पहिलो भागलाई "परमेश्वरको राज्य द्वारा प्रचार गरिएको सुसमाचार हो" भनेर प्रतिस्थापित गर्दछ। यस भिन्नताले सुझाव दिन्छ कि यस युगमा साम्राज्यको प्रगति व्यावहारिक रूपमा यसको घोषणाको बराबर हो। परमेश्वरको राज्य छ - यो पहिले नै अवस्थित छ - र यो यसको घोषणा मार्फत प्रगति भइरहेको छ।
कोही फरिसीहरूले येशूलाई सोधे, “परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ?” (लूका १:१:17,20)। तपाईं यसलाई देख्न सक्नुहुन्न, येशूले जवाफ दिनुभयो। तर येशूले यो पनि भन्नुभयो: God परमेश्वरको राज्य तपाईंभित्र छ [a। Ü। तपाईं बीचमा] » (लूका १:१:17,21)। येशू राजा हुनुहुन्थ्यो, र किनकि उहाँले उनीहरू बीचमा चमत्कार र शिक्षा दिनुभयो, त्यस राज्य फरिसीहरूको बीचमा थियो। येशू आज हामीमा पनि हुनुहुन्छ, र जसरी परमेश्वरको राज्य येशूको कार्यमा उपस्थित थियो, त्यसरी नै यो आफ्नो चर्चको सेवामा उपस्थित छ। राजा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यसको आत्मिक शक्ति हामीभित्र छ, यदि परमेश्वरको राज्य अझैसम्म पूर्ण शक्तिमा काम गरिरहेको छैन भने पनि।
हामी पहिले नै परमेश्वरको राज्यमा सरुवा भएको छ (कलस्सी १:१:1,13)। हामीले पहिले नै एउटा राज्य पाइरहेका छौं र यसका लागि हाम्रो सही जवाफ आराधना र श्रद्धा हो (हिब्रू १०: २)) ख्रिष्टले हामीलाई [विगत काल] पुजारीहरूको एक राज्य बनायो। (प्रकाश :1,6:१)। हामी पवित्र जन हौं - अब र अहिले - तर हामी के हुनेछौं भनेर अझसम्म खुलाइएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई पापको शासनबाट मुक्त गर्नुभयो र उहाँको शासन अन्तर्गत हामीलाई उहाँको राज्यमा राख्नुभयो। परमेश्वरको राज्य यहाँ छ, येशूले भन्नुभयो। उनका श्रोताहरूले एक विजयी मसीहको लागि पर्खनु पर्दैनथ्यो - भगवानले शासन गरिसक्नुभएको छ र हामीले अब उनको तरिकामा जिउनु पर्छ। हामीसँग अहिलेसम्म कुनै इलाका छैन, तर हामी परमेश्वरको शासनको अधीनमा आउँछौं।
परमेश्वरको राज्य पहिले नै अवस्थित छ भनेर बुझ्दा हाम्रो वरिपरिको अरूको सेवा गर्न बढी ध्यान दिन मद्दत गर्दछ। तर हामी यो बिर्सदैनौं कि परमेश्वरको राज्यको अन्त्य भविष्यमा अझै छ। यदि हाम्रो आशा यस युग मा छ भने, हामी थोरै आशा छ (२ कोरिन्थी १ 1:१:15,19)। मानव प्रयासका साथ परमेश्वरको राज्य ल्याउने हाम्रो बारेमा कुनै भ्रम छैन। जब हामी अवरोध र सतावटहरूको सामना गर्दछौं, जब हामी देख्छौं कि अधिकांश मानिसहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गर्दछन्, हामी ज्ञानबाट बल पाउँछौं कि साम्राज्यको पूर्णता भविष्यको युगमा छ।
असंख्य पदहरूले हामीलाई बताउँदछन् कि परमेश्वरको राज्य एक सुन्दर भविष्यको वास्तविकता हुनेछ। हामीलाई थाहा छ कि येशू एक राजा हुनुहुन्छ र हामी त्यस दिनको लागि उत्सुक छौं जब उसले आफ्नो शक्ति एक महान र नाटकीय तरिकामा मानव पीडाहरूको अन्त्य गर्न प्रयोग गर्नेछ। दानियलको पुस्तकले परमेश्वरको राज्यको भविष्यवाणी गर्छ जसले सारा पृथ्वीमाथि शासन गर्नेछ (डानियल २.2,44; .7,13.१14-१-22। २२)। प्रकाशको नयाँ नियम पुस्तकले उसको आगमनलाई वर्णन गर्दछ (प्रकाश ११:१:11,15; १ .19,11 .११-१-16)
हामी प्रार्थना गर्दछौं कि राज्य आयो (लूका १:१:11,2)। आत्मामा दरिद्र र उत्पीडितहरू आफ्नो भविष्य "स्वर्गमा इनाम" को प्रतीक्षा गर्दै (मत्ती 5,3.10.12।।) भविष्यमा न्यायको "दिन" मा मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा आउनेछन् (मत्ती:: २१-२7,21; लूका १:: २२--23०) येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको थियो किनभने कसै-कसैको विश्वासमा परमेश्वरको राज्य एकै क्षणमा देखा पर्नेछ (लूका १:१:19,11)। जैतून डाँडाको भविष्यवाणीमा येशूले शक्ति र महिमामा फर्किनु अघि हुने नाटकीय घटनाहरूको वर्णन गर्नुभयो। आफ्नो क्रूसमा टाढा हुनुभन्दा केही समय अघि, येशूले भविष्यको राज्यको बाटो हेर्नुभयो (मत्ती 26,29।।)
पावलले भविष्यको अनुभवको रूपमा धेरै पटक "राज्यको हकदार" रहेको कुरा गरे (१ कोरिन्थी 1-१०; १ 6,9०; गलाती 10.२१; एफिसी 15,50..5,21) र अर्कोतर्फ, उसले आफ्नो भाषामार्फत ईश्वरको राज्यलाई त्यस्तो चीजको रूपमा दर्शाउँछ जुन युगको अन्त्यमा मात्र महसुस हुनेछ। (२ थिस्सलोनिकी २:१२; २ थिस्सलोनिकी १:;; कलस्सी :2:११; २ तिमोथी:: १, १ 2,12)। जब पावलले राज्यको उपस्थितिमा केन्द्रित हुन्छन्, उसले कि त "न्यायको" शब्द "परमेश्वरको राज्य" को साथ शुरू गर्दछ। (रोमी १:14,17:१) वा यसको सट्टामा प्रयोग गर्न (रोमी :1,17:११)। परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताबीच नजिकको सम्बन्धको लागि मत्ती :6,33:। हेर्नुहोस्। वा पावल टेन्डर गर्दछन् (वैकल्पिक) परमेश्वर पिताको सट्टा राज्यसँग ख्रीष्टको साथ जोड्न (कलस्सी १:१:1,13)। (जे। रम्से माइशेल्स, "भगवान र ऐतिहासिक येशू" को अध्याय,, परमेश्वरको राज्य २० औं शताब्दीको व्याख्या, वेंडेल विलिस द्वारा सम्पादन गरिएको [हेन्ड्रिकसन, १ 8 20 page], पृष्ठ ११२)।
थुप्रै “परमेश्वरको राज्य” धर्मशास्त्रले परमेश्वरको वर्तमान राज्यको साथै भविष्यको पूर्तिलाई संकेत गर्न सक्छ। कानून भbre्ग गर्नेहरूलाई स्वर्गको राज्यमा सब भन्दा कान्छो भनिन्छ (मत्ती १०: १ -5,19 -२०) हामी परमेश्वरको राज्यको खातिर परिवारहरू छोडछौं (लूका १:१:18,29)। हामी स God्कष्टहरू मार्फत परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछौं (प्रेरित १:)) यस लेखमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केहि छ भने केही पदहरू वर्तमान कालमा स्पष्ट छन्, र केहि भविष्यमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका छन्।
येशूको पुनरुत्थानपछि चेलाहरूले उहाँलाई सोधे: "प्रभु, के तपाईंले यस समयमा इस्राएलको लागि राज्य फेरि स्थापना गर्नुहुनेछ?" (प्रेरित १:)) यस्तो प्रश्नको जवाफ येशूले कसरी दिने? चेलाहरूले "साम्राज्य" भनेको के थियो येशूले सिकाउनुभएको थिएन। सबै जातिहरू मिलेर बनेको बिस्तारै विकासशील व्यक्तिहरूको सट्टा चेलाहरूले अझै पनि राष्ट्रिय राज्यको रूपमा सोच्दै थिए। मूर्तिपूजकहरूलाई नयाँ राज्यमा स्वागत छ भन्ने कुरा बुझ्न तिनीहरूलाई वर्षौं लाग्यो। ख्रीष्टको राज्य अझै यस संसारबाट बाहिर थियो, तर यस युगमा सक्रिय हुनुपर्छ। त्यसकारण येशूले हो भनेर होईन वा होईन भन्नुभएन - केवल भर्खरै मात्र भन्नु भयो उनीहरूको लागि काम थियो र यो काम गर्न सक्ने शक्ति छ (V. 7-8)
जब परमेश्वरले अब्राहामलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उनका सन्तानहरू ठूलो जाति हुनेछन् र राजाहरू तिनीहरूबाट आउनेछन् (उत्पत्ति १ 1: 17,5-)), उहाँले उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर यो सानो भए जस्तो, पिठोमा खोर्सानीको जस्तो छ, र यसले सयौं बर्ष लिनको लागि यसलाई देख्यो।
जब परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट निकालेर उनीहरूसँग एउटा सम्झौता गर्नुभयो, तिनीहरू पूजाहारीहरूको एक राज्य भए (प्रस्थान १::)), एक राज्य जुन परमेश्वरको हो र परमेश्वरको राज्य कहलाउन सकिन्छ। उनीहरूसँग बाँधेको करार साना राष्ट्रहरूसित शक्तिशाली राजाहरूले गरेको करारसित मिल्दोजुल्दो छ। उसले उनीहरूलाई बचायो र इस्राएलीहरूले जवाफ दिएः तिनीहरू उनीहरूका मानिसहरूमा राजी भए। परमेश्वर उनीहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो (१ शमूएल १२:१२;::))। दाऊद र सुलेमान परमेश्वरको सिंहासनमा बसे र उहाँको नाममा शासन गरे (१Chr २ :1: २))। इस्राएल परमेश्वरको राज्य थियो।
तर मानिसहरूले तिनीहरूका परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई पठाउनुभयो, तर नयाँ देशको साथ राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो (यर्मिया 31,31१.33१-), नयाँ करारमा भाग लिने भविष्यवाणी आज चर्चमा पूरा भयो। हामी, जसलाई पवित्र आत्मा दिइएको थियो, शाही पुजारीको दल र पवित्र राष्ट्रहरू जुन पुरातन इस्राएलका गर्न असमर्थ थियो (१ पत्रुस २,।; प्रस्थान १,,))। हामी परमेश्वरको राज्यमा छौं, तर सामा अब बालीको बीचमा बढ्दैछ। युगको अन्तमा, मसीह शक्ति र महिमामा फर्कनुहुनेछ, र परमेश्वरको राज्य फेरि देखा पर्नेछ। साम्राज्य पछिको साम्राज्य, जहाँ सबै जना सिद्ध र आध्यात्मिक छन्, सहस्राब्दी भन्दा एकदम फरक हुनेछ।
राज्यको ऐतिहासिक निरन्तरता भएकोले विगत, वर्तमान र भविष्यको कालखण्डमा यसको कुरा गर्नु ठीक छ। यसको ऐतिहासिक विकासमा, यसले प्रमुख माइलस्टोनहरू पाइसकेको छ र नयाँ चरणहरू शुरू हुने बित्तिकै जारी रहनेछ। साम्राज्य सीनै पर्वतमा स्थापित भयो; यो येशूको कार्यमा र यसको माध्यमबाट उठाइएको थियो; यो निर्णय पछि यसको फिर्ती मा स्थापित हुनेछ। प्रत्येक चरणमा, परमेश्वरका जनहरू आफूसँग भएका कुरामा रमाउनेछन् र भविष्यमा के हुनेछ त्योमा उनीहरू रमाउनेछन्। जब हामी अब परमेश्वरको राज्यको केहि सीमित पक्षहरु अनुभव गर्छौं, हामी विश्वस्त छौं कि भविष्यमा परमेश्वरको राज्य पनि एक वास्तविकता हुनेछ। पवित्र आत्मा हाम्रो ठूलो आशिषको ग्यारेन्टी हो (१ कोरिन्थी १२:२:2; एफिसी :5,5:११)।
शब्द साम्राज्य वा राज्य कहिले सुन्नेछौं हामीलाई यो संसारको साम्राज्यको सम्झना गराइनेछ। यस संसारमा राज्य अधिकार र शक्तिसँग सम्बन्धित छ, तर सद्भाव र प्रेमको साथ होइन। राज्यले परमेश्वर आफ्नो परिवारमा अख्तियारको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ तर यसले परमेश्वरले हाम्रो लागि गर्नुहुने सबै आशिष्‌हरूको वर्णन गर्दैन। यसैले अन्य छविहरू प्रयोग गरिन्छ, जस्तै पारिवारिक पदावली बच्चाहरू, जसले परमेश्वरको प्रेम र अधिकारलाई जोड दिन्छ।
मुक्ति एक अधिक सामान्य शब्द हो। पावलले भने कि हामी बाँचे (एफिसी २:)), हामी मुक्ति पाएका छौं (२ कोरिन्थी २:१:2) र हामी बचाइनेछौं (रोमी :5,9:११)। परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छ र उहाँ हामी विश्वासमा उहाँलाई जवाफ दिनुहुन्छ। युहन्नाले मुक्ति र अनन्त जीवनलाई वर्तमान वास्तविकता, सम्पत्ति भनेर लेखेका थिए (१ यूहन्ना:: ११-१२) र भविष्यमा आशिष्‌।
जब येशू परमेश्वरको राज्यको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो शारीरिक आशिषमा जोड दिनुभएन वा आफ्नो कालक्रमलाई स्पष्ट पार्नुहुन्न। यसको साटो, उनले यसमा भाग लिन मानिसहरूलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित गरे। कर उठाउनेहरू र वेश्याहरू परमेश्वरको राज्यमा आउँछन् भनी येशूले भन्नुभयो (मत्ती २१::21,31१), र तिनीहरू सुसमाचारमा विश्वास गरेर त्यसो गर्छन् (V. )२) र बुबाको इच्छा गर्नुहोस् (V. 28-31) जब हामी विश्वास र विश्वासका साथ परमेश्वरलाई जवाफ दिन्छौं हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छौं।
मर्कूस १० मा, एक व्यक्ति अनन्त जीवनको हकदार हुन चाहान्थ्यो, र येशूले आज्ञा पालन गर्नु पर्छ भनेर भने (मार्क १10,17--19) येशूले अर्को आज्ञा पनि थप्नुभयो: स्वर्गमा धनसम्पत्तिको लागि आफ्नो सबै सम्पत्ति त्याग्न आज्ञा गर्नुभयो (V. 21) येशूले चेलाहरूलाई यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो: "धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्न कति गाह्रो हुन्छ!" (V. 23) चेलाहरूले सोधे: "त्यसोभए कसले उद्धार पाउन सक्छ त?" (V. 26) यस खण्ड र लूका १:: १ 18,18--30० को समानान्तर खण्डमा धेरै पदहरू एउटै कुरालाई औंल्याइएको छ: राज्य प्राप्त गर्नुहोस्, अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ, स्वर्गमा धनसम्पत्ति स collect्कलन गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, मुक्ति पाउनुहुनेछ। जब येशूले "मलाई पछ्याउनुहुन्छ" भन्नुभयो (V. २२), उही कुरालाई संकेत गर्न उसले अर्को अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दछ: हामी येशूमा हाम्रो जीवन केन्द्रित गरेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्दछौं।
लूका १२: 12,31१--34 मा येशूले औंल्याए कि थुप्रै अभिव्यक्तिहरू उस्तै छन्: परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्ने, एउटा राज्य पाउने, स्वर्गमा धनसम्पत्ति भएको, भौतिक सम्पत्तिमा भरोसा राख्ने। हामी येशूको शिक्षालाई स्वीकारेर परमेश्वरको राज्य खोजी गर्छौं। लूका २१:२:21,28 र In० मा परमेश्वरको राज्यको छुटकाराको बराबरी छ। प्रेरित २०: २२--30२ मा हामी सिक्छौं कि पावलले राज्यको सुसमाचार प्रचार गरे, र उनले परमेश्वरको अनुग्रह र विश्वासको सुसमाचार प्रचार गरे। राज्य मुक्तिसँग नजिकको सम्बन्धित छ - राज्यको प्रचार गर्न लायक हुने थिएन यदि हामी यसमा भाग लिन सक्दैनौं, र हामी केवल विश्वास, पश्चात्ताप, र अनुग्रहको माध्यमबाट प्रवेश गर्न सक्दछौं, त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरको राज्यको बारेमा प्रत्येक सन्देशको अंश हुन्। मुक्ति एक वर्तमान वास्तविकता साथै भविष्यको आशिषको प्रतिज्ञा हो।
कोरिन्थमा पावलले ख्रीष्ट र उहाँको क्रूसमा बाहेक अरू केही प्रचार गरेन (२ कोरिन्थी १ 1:१:2,2)। प्रेरित २ 28,23.29.31:२, २: .१ मा लूकाले हामीलाई बताउँदछ कि पावलले परमेश्वरको राज्यको साथै येशू र रोमको मुक्तिको बारेमा प्रचार गरे। यी तीनै इसाई सन्देशका विभिन्न पक्षहरू छन्।